आफैं मन्त्री, आफैं ठेकेदार – onlinedarpan:
Posted on October 31, 2018 October 31, 2018 Author onlinedarpanComment(0) 208 Views
केएसकेमा खत्रीका साथै उनका भाइ लोकेश र व्यवसायी सूर्य खत्री साझेदार छन् । मन्त्री खत्रीले २०७४ चैत ५ गते सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा प्रदीप कन्स्ट्रक्सनको नाममा ५ स्काभेटर, ८ ट्रिपर, ३ जिप, २ ट्रक र ३ भ्याकुमलोडर रहेको उल्लेख छ । साथै नेपाल बंगलादेश बैंक र एनसीसी बैंकमा विभिन्न किसिमको ११ करोड ८७ लाख रुपैयाँ ऋण रहेको पनि उल्लेख छ ।-कान्तिपुरबाट
भाइटीकाको शुभ साइत सार्वजनिक, हेर्नुस् कुन समयमा छ ?
Share7TweetGoogle+Pin07sharesकाठमाडौँ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यस वर्षको भाइटीकाको साइत सार्वजनिक गरेको छ । समितिको आज बसेको बैठकले यही कात्तिक २३ गते बिहान ११ बजेर ५५ मिनेटमा भाइटीकाको साइत उत्तम हुने निर्णय गरेको समितिका अध्यक्ष प्रा. डा. रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए । समितिले शुभ बेलाको साइत दिएको जनाइएको छ । यस वर्ष यमपञ्चक अर्थात् तिहार विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
Share11TweetGoogle+Pin011sharesअसोज २५, काठमाडौँ । गोंगबु बसपार्क पुगेका अर्घाखाँचीका सयौज पोख्रेल टिकट काउन्टरमा पुग्नुभयो । अर्घाखाँची सन्धीखर्कका लागि टिकट दिनुस् भनेर काउन्टरका कर्मचारीसँग टिकट माग्नुभयो । काउन्टरका कर्मचारीले भने– ‘२७ गतेको टिकट प्याक छ । बिहानै आउनुहोला । गाडी थप गर्छौं ।’ अन्ततः सयौज टिकट नै नलिई रित्तै हात फर्किनुभयो । घर जान टिकट लिन बसपार्क पुगेका विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
Share7TweetGoogle+Pin07sharesनेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र आन्तरिक एकतालाई लिएर विवाद चुलिरहेका बेला नेता वामदेव गौतमलाई उपनिर्वाचन लड्ने विषयले झनै विवाद बढाएको छ । नेकपाले बर्दिया निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा चुनावमा पराजित नेता गौतमलाई काठमाडौं ७ बाट निर्वाचित सांसदलाई राजीनामा गराएर संसदमा लैजाने प्रक्रिया सुरु गरेपछि यसले विवाद भने चर्काएको हो । मंगलबार नेकपाका सांसद रामवीर मानन्धरले विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
१ सय रुपैयाँ जरीवाना बुझाउन नसक्दा जेल चलान !